Motion xilka looga qaadayo Shariif Xasan oo mudanayaasha taagta taran ee Baydhabo ku sugan la filayo in maanta la horkeeno, Pegos, Kiish Bur iyo Sheekh Adan Madoobe oo la filayo in ay ku tartamaan jagada guddoomiye Shariif, EU-da iyo Jaamacadda Carabta oo si weyn u diidan xilka laga qaado. Ruunkinet 17/01/07
Motion la doonaya in xilka looga qaado guddoomiyaha baarlamaanka dowladda federaalka ah ee Soomaaliya ayaa la filayaa in maanta la horkeeno mudanayaasha itaalka yar ee ku sugan magaalada Baydhabo.
Motionka oo ay u ol oleynayaan raisul wasaare Geeddi iyo qaaar ka tirsan beelaha Digil iyo Mirifle ayaa la filayaa in ay inta badan isku raacaan in ay ogolaadaan motionkaasi ayadoo ciddii diidda laga yaabo in loo aqoonsado argagixso ama ku waayo jagada haddii uu ka tirsan yahay golaha wasiirada.
Mudanayaasha kala ah Pegos, Kiish Bur iyo Sheekh Aadan Madoobe ayaa la sheegay in ay doonayaan in ay u tartamaan xilka guddomiye Shariif kadib markii ay xilka ka qaadaan mudanayaasha cabsida ku jirta ee ku sugan magaalada Baydhabo.
Warka ayaa intaasi ku daraya in mudanayaa si weyn dowladda u raacasan oo ay ka mid yihiin Buubaa, Cabdi Tarax iyo Qaar kale looga yeeray in ay si dhaqsi ah u tagaan Baydhabo ayagoo joogay Nayroobi.
Warar aan la xaqiijin ayaa sheegaya in laga yaabo in madaxweyne Cabdullahi Yuiusuf dib u dhigo motionka in kastoo raisul wasaare Geeddi uu si weyn u doonayo in xilka laga qaado Shariif Xasan.
EU-da oo dhawaan kula kulantay guddoomiyaha baarlamaanka ayaa la sheegay in ay si weyn uga soo horjeedaan xil ka qaadista xildhibaan Shariif Xasan ayadoo warar kalana ay sheegayaan in Jaamacadda Carabta ay si weyn u diidan yihiin arrintan la sheegay in ay tahay mid dastuurka ka baxsan.
Dhinka kale, raisul wasaaraha dowladda Itoobiya ayaa shalay muddo gaaban la kulmay madaxweynaha Kenya mar uu booqsho ku tahay dalka Kenya.